July 2019 - Uptodate MM
Uptodate MM | July 14, 2019
သမီးလေး ကိစ္စမှာ အမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်မှ နစ်နာသူတွေ ပြန်လည်ကုစားလို့ ရပါမယ်။အခု အားလုံးလည်း သိနေပြီမို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါ့မယ်။အများပြည်သူက ထင်နေကြတဲ့ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် သားနှစ်ယောက်သည် အောင်ကြီးကို ထောင်ချလိုက်ရုံနဲ့ သူတို့ ဘ၀ ပြန်လည် ကုစားလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်ကြီးသည် တရားခံ အစစ် ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာကို အများပြည်သူ
မြန်မာကော်ဖီ မွှေးတယ်ဆိုပြီး ထိုင်းမှာရောင်းဖို့ ထိုင်း FDA ကိုစစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ
ကော်ဖီအနံ့လေး အရမ်းမွှေးတာပဲနော် ဒီတခေါက် ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကိုဆုံးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်သူ့စီးပွားရေး ကို ထိခိုက်လိုချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါတယ် ကော်ဖီမစ် COFFEE MIX အကြောင်းပါ ဗျ။ကျွန်တော် ဟာ လက်ရှိ THAI ခေါ် ယိုဒယားပေါ့ အဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ အများအားဖြင့် လက်တွဲပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှူလုပ်ကိုင်နေသူပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ထိုင်းနိုင်ငံက
Uptodate MM | July 11, 2019
အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားအသစ်တစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ စေတနာ လေးစားစရာပါ…. 11.7.2019တဦး​မေတ္တာနဲ့တဦး​စေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင် အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှ ရွှေထီး ထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအား ကားတစီးလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်​ အဖွားက ဒေါ်ခင်တင့်၊ အသက်(၈၀)ပါ။ သားသမီး (၅)ယောက်ရှိပြီး တစ်ယောက်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်လို့ လက်ရှိ သားသမီး(၄)ယောက်ရှိတယ် ပြောပါတယ်။ “ မျက်စိရှေ့မှာ ငွေတွေ အပုံလိုက်ရောက်နေတာ “ အိပ်မက် မက်လို့
Uptodate MM | July 6, 2019
ဗစ်တိုးရီယားအတွက် တရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်ရေးဟု ဆိုသည့် ဆန္ဒပြပွဲမှာ အနုပညာရှင်များလဲ ပူးပေါင်းပါဝင် Zawgyi ဗစ်တိုးရီယားအတွက် တရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်ရေးဟု ဆိုသည့် ဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ်ကို ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် အင်းစိန်၊ မင်းဓမ္မကုန်းရှိ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားစုပ်ရပ်မှ အင်းစိန် CID ရုံးရှေ့အထိ အင်္ကျီအဖြူဝတ်ဆင်ထားသူများက ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်… “ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် တရားမျှတမှုရရှိရေး၊
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈၉ ရှိနံမည်ကြီးကြက်တောင်ကစားသမား Kate Foo Kune ကို ၂ ပွဲပြတ်နဲ့ အနိုင်ရလိုက်ပြန်တဲ့..မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမလေးရေ . . .
Uptodate MM | July 5, 2019
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၈၉ ရှိနံမည်ကြီးကြက်တောင်ကစားသမား Kate Foo Kune ကို ၂ ပွဲပြတ်နဲ့ အနိုင်ရလိုက်ပြန်တဲ့..မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် သက်ထားသူဇာဂုဏ်ယူပါတယ် ညီမလေးရေ . . . ယနေ့ ည Ivory Coast နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော Cote d’ivoire International 2019 နိုင်ငံတကာကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်လက်ရွေးစင်သက်ထားသူဇာ က
၃ နှစ်အရွယ်ဗစ်တိုးရီးယားအတွက်… ပြည်သူများက.. ကျောက်တော်ကြီးဘုရားရှေ့မှ အင်းစိန် CID ရုံးရှေ့အထိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုမြင်ကွင်းများ
၃ နှစ်အရွယ်ဗစ်တိုးရီးယားအတွက်… ပြည်သူများက.. ကျောက်တော်ကြီးဘုရားရှေ့မှ အင်းစိန် CID ရုံးရှေ့အထိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုမြင်ကွင်းများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရသော ၃ နှစ်အရွယ်ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် ပြည်သူများက ယနေ့(ဇူလိုင်လ ၆ ရက်)၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားရှေ့မှ အင်းစိန် CID ရုံးရှေ့အထိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုမြင်ကွင်းများ။ Unicode Version လိငျပိုငျးဆိုငျရာစျောကားခံရသော ၃
ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို
ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို Zawgyi ယုတ်မာသူတွေအတွက် တကယ့်တိုက်ပွဲမှာ ကျည်ကုန်ပစ်ဖို့ စုထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသက္ကမိုးညို ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲသည် အောင်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လာတယ်။ အင်မတန် အားနည်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ပြတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာသည် ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကို တရားရုံးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်တာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တဲ့
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ကို ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာတဦး
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ကို ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာတဦး Zawgyi နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ကို ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာတဦး ကျောင်းဆရာတွေလည်း ပေါက်ကွဲကုန်ပြီ။ အမှန်ပဲလေ ကိုယ်သာဆို ကျောင်းကို အရင်စဆွဲမှာ ဦးပညာ ရေ.. မင်း က အခုမှ မင်းကျောင်းက ဒရိုင်ဘာမဟုတ်တဲ့ အောင်ကြီးက မင်းရဲ့ ကျောင်းထဲမှာ ၂၆ မိနစ် နေသွား
Zawgyi နေပြည်တော်က သမီးလေးရဲ့သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကတော့ အခုလတ်တလောမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရတဲ့ အမှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ အချိန်တစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိ တရားခံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ ဒီအမှုက အခုတော့ တရားခံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက တရားခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေ တော်တော်များများကလည်း သမီးလေး Victoria ဘက်က
Zawgyi “သားမှမဟုတ်တာ၊ အမှန်အတိုင်းပဲ သားကပြောတာပေါ့၊ စီအိုင်ဒီကမေးတယ်၊ စခန်းကမေးတယ်၊ သူ့ကို ၃ခါစစ်တယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲ ထွက်ဆိုတယ်” လို့ ဗစ်တိုးရီယားအမှုမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အောင်ကျော်မျိုး (ခ) အောင်ကြီးရဲ့ မိဘတွေက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အသက်၂နှစ် ၁၁လအရွယ် မူကြိုကျောင်းသူတစ်ယောက် မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး